5 रोम बाट दिन यात्राहरू इटाली अन्वेषण गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5रोम बाट दिन यात्राहरू इटाली अन्वेषण गर्न
रोम एक भव्य शहर हो, तर कहिले काँही एक यात्री किसिम को एक बिट craves. पर्याप्त रोम लामो रहन गर्नेहरूलाई अन्वेषण गर्न यो क्षेत्र वरिपरि नजर छ गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ, धेरै. खुसीको, त्यो दिन यात्राको लागि के हो! विचार रोम सबैभन्दा स्थानहरू रेल द्वारा कति राम्रो जडान, सबै भन्दा ठूलो चुनौती कहाँ जाने छनौट गरिएको छ. तथापि, हामी तपाईंलाई यसै गर्न मद्दत गर्न सूची तयार छन्. यहाँ छन्5रोम यात्रा बाट इटाली अन्वेषण गर्न दिन यात्रा कुनै पनि यात्री रमाईलो हुनेछ!
1. एक दिन यात्रा Ostia Antica गर्न
Ostia Antica रोम देखि वरिपरि 30km दूर प्राचीन बन्दोबस्त छ. प्राचीन को दिनमा फिर्ता, यो शहर रोम को एक प्रमुख बंदरगाह थियो र यहाँ हेर्न प्रशस्त छ. उदाहरण को रुपमा, you can takealook at the public baths with beautiful mosaics.
यसबाहेक, को एम्पिथियटर र मुख्य सडक पनि छ. भग्नावशेषहरूले केही महत्वपूर्ण मन्दिर को रहलपहल समावेश, यस्तो हर्कुलेसक्लस्टर समर्पित एक रूप.
2. TIVOLI इटाली
हामी सुझाव छ कि रोम अर्को दिन यात्राहरू Tivoli छ, मनपर्ने शहर रोमी सम्राट् Hadrian को दोस्रो शताब्दी मा भाग्ने. उहाँले निर्माण Hadrians Villa यो सुन्दर नजिकैको सहरमा, जो उहाँले समाप्त अप रोम मा आफ्नो निवास भन्दा बढी लाईक.
अन्तिम विश्राम स्थानको रूपमा, Tivoli मा Hadrians Villa छ उद्यान र पुस्तकालयहरु, र यो अन्ततः शहर नै भयो. महलों र मन्दिर भ्रमण एक चाखलाग्दा भाग हो, जो Tivoli यो मूल्य आफ्नो दिन यात्रा गर्नेछ.
3. रोम देखि Bracciano गर्न दिन यात्राहरू
रेल बन्द हप रोम देखि एक घन्टा लामो सवारी पछि, र तपाईं Bracciano आइपुगेको हुनेछ. यो सुन्दर मध्ययुगीन शहर Bracciano लेक को किनारा मा प्रशस्त छ प्रस्ताव गर्न ठाँउहरु. उदाहरणका लागि, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ Orsini Odesalchi क्यासल, which wasaresidence of many nobles.
के थप, यो imposing हवेली पनि Katie होम्स मा विवाह जहाँ टम क्रूज ठाउँ थियो 2006. यसबाहेक, तपाईं Braccianos गिर्जाघर दौरे गर्न सक्नुहुन्छ, जो मध्ययुगीन समय समयमा बनाइएको थियो.
धेरै ऐतिहासिक महत्त्व को एक शहर रूपमा, नेपल्स अनुभव गर्न खोजिरहेको कसैको लागि भ्रमण पर्छ छ इटाली र रोम देखि एक दिन यात्राहरू लिन. माउन्ट VESUVIUS को दृश्य, सुन्दर वास्तुकला, र न्यानो, मैत्री स्थानीय शहर को मुख्य सुविधाहरू छन्. तथापि, नेपल्स पनि रूपमा प्रसिद्ध छ पिज्जा जन्म ठाउ Margherita. के थप छ, Antica पिज्जेरिया PortAlba - उनीहरूले पहिलो पिज्जा गरे जहाँ पिज्जा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ.
रोम बाट दिन यात्राको लागि हाम्रो अन्तिम सुझाव फ्लोरेन्स छ, जो धेरै टाढा एक दिन यात्राको लागि टाढा एक बिट हुन थाल्छ सक्छ. तथापि, यसलाई सजिलै छ र रेल मार्फत चाँडै पहुँचयोग्य. र बस ऐतिहासिक देखेर, स्थापत्य को विचार से enchanting फ्लोरेन्स को केन्द्र को यात्रा यो मूल्य गर्नेछ. Duomo di Firence प्रसिद्ध फ्लोरेन्स गिर्जाघर छ, जो पूर्ण शहर को पुरानो showcases. रोम बाट एक दिन यात्रा मा फ्लोरेन्स गएर ठूलो तरिका हो आफ्नो छुट्टी अप र्याप.
रोम नजिकै यी ठाउँहरू सबै गएर लायक. तपाईं सिद्ध दिन यात्राको लागि देख रहे भने, आफ्नो मनपर्ने छान्न र जाने. सजिलो छ!
तपाईंको इटालियन साहसिक लागि तयार? आफ्नो बैग प्याक, आफ्नो छुट्टी गतिविधिहरु योजना, र पुस्तक आफ्नो रेल टिकट समयमा!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 रोम बाट दिन यात्राहरू इटाली अन्वेषण गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-rome-explore-italy%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Daytrips ट्रैवलफ्लोरेन्स यात्रा ट्राभ्रोम traveltips